Sat, Jul 4, 2020 at 5:37am
मृगको मासु र भरुवा बन्दुकसहित २ जना पक्राउ
काठमाडाैं, १४ वैशाख। जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका २ जनालाई प्रहरीले मृगको मासुसहित पक्राउ गरेको छ । शनिबार समातिएका सोही पालिका–२ का उनीहरुलाई बाह्रबिसे इलाका प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार पक्राउ पर्नेमा ३९ वर्षीय हीराबहादुर गुरुङ र ३४ वर्षीय टपीन्द्रबहादुर गुरुङलाई घरेलु हतियारसहित पक्राउ गरिएको थियो । जङ्गली जनावर मारेको भनी जानकारी प्राप्त हुनासाथ सो इलाका प्रहरी कार्यालय बाह्रबिसेबाट..
मन्त्रिपरिषद बैठक आज बस्दै, लकडाउनबारे छलफल
काठमाडाैं : मन्त्रिपरिषद बैठक आज बस्दै छ। आज बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउनका बारेमा निर्णय गर्ने छ। प्रधानमन्त्री निवासमा आइतबार बस्ने बैठकले लकडाउनकाे बारेमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालयले जनाएकाे छ। हिजो बसेको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले लकडाउन हटाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले अझै एकसाता लकडाउन लम्व्याउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले स्वरुप परिवर्तन..
मलामी गएका नगरप्रमुख घर्तीमाथि आक्रमण
जाजरकोट,१ वैशाख। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीमाथि आक्रमण भएको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं नगरप्रमुख घर्तीमाथि शनिबार जिल्लाको भेरी नगरपालिका–१० को फेराखोलास्थित भेरी नदीको किनार छेउमा आक्रमण भएको हो । साविकको पुन्मा गाविसका अध्यक्ष मधु चन्दको मृत्युपछि उहाँको मलामी गएका नगरप्रमुख घर्तीलाई सत्तारूढ नेकपाका युवासङ्घ नेपाल जाजरकोटका संयोजक दीपेन्द्र शाहीको समूहले आक्रमण गरेको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला..
सीमा क्षेत्रमा २०० नेपाली नेपाल आउने आसमा: थालियो पूर्वतयारी
काठमाडाैं, १४ वैशाख। झापाको सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा २०० भन्दा बढी नेपाली नेपाल आउने आसमा बसिरहेका छन् । झापासँग सीमा जोडिएको भारतीय बजार गलगलिया, पानीट्याङ्की, नक्सलवाडी क्षेत्रमा २०० भन्दा बढी नेपाली रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाका सभापति लोकराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । “कतिपय नेपाली भारतीय क्वारेन्टाइन, कतिपय आफन्त र कतिपय अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्”, सभापति ढकालले भन्नुभयो, “स्वदेश आउनका लागि १५० ले..
ओली र गौतमको चर्काचर्की : 'राजीनामा दिनुस्, बालकोट फर्कनुस्'
काठमाडाैं, १४ वैशाख । सत्तारुढ दल नेकपामा स्थायी कमिटी बैठकलाई लिएर रस्साकसी चलिरहेको छ। स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यले लिखित रूपमा बैठक माग गरेपछि सचिवालयका ६ नेताले पनि त्यसमा समर्थन जनाएका छन्। तर, पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अझै पनि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनेबारे ठोस जवाफ दिएका छैनन्। शुक्रबार बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीचको भेटमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले स्थायी कमिटी बैठकको माग..
काठमाण्डौंमा फसेका सुदूरपश्चिमवासीलाई आज साँझ उद्दार गरिदै
धनगढी, १३ बैशाख । काठमाण्डौंमा लकडाउनमा फसेका बिद्यार्थी, मजदुर तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण छाक टार्न समस्या भएका सुदूरपश्चिमेलीहरुलाई आज उद्दार गरिने भएको छ । अन्य प्रदेशका बासिन्दालाई सरकारमै रहेका मन्त्रीहरुले उद्दार गरेको खवर सार्वजनिक भईरहदा काठमाण्डौंमा रहेका सुदूरपश्चिमवासीले आफूहरुको सरकार नभएको गुनासो गरेका थिए । काठमाण्डौंमा फसेकाहरुको उद्दारका लागि हिजो धनगढीबाट र महेन्दनगरबाट ९ वटा बस काठमाण्डौं पठाईएका छन् । भीमदत्त नगरपालिका,..
विश्वभर १ लाख ९७ हजार भन्दा बढीको मृत्यु, अमेरिकामा मृतकको संख्या ५२ हजार नाघ्यो (कोरोना अपडेट)
एजेन्सी । विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरस महामारीबाट विश्वभर एक लाख ९७ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने २८ लाख ३३ हजार व्यक्ति संक्रमित भएका छन् । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार नेपाली समयअनुसार शनिबार मध्यान्हसम्ममा संयुक्तराज्य अमेरिकामा विगत २४ घण्टाको अवधिमा १ हजार ९५९ जनाको मृत्यु भएको छ । यो सहित अमेरिकामा सबैभन्दा बढी ५२ हजार २१७ जनाको मृत्यु भएको छ । युरोपेली..
आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु थप १५ दिन बन्द
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु थप १५ दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । . शनिबार बसेको समिति बैठकले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु मे १५ तारिख अर्थात जेठ २ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि अप्रिल ३० सम्म उडानहरु बन्द थिए । समन्वय समितिले उडानहरु बन्द गर्ने निर्णय..
ओलीले रजिनामा देलान? नेपाल बन्लान त नयाँ प्रधानमन्त्री ?
दुई विवादित अध्यादेशका कारण सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चर्किएको विवाद अहिलेसम्म सेलाउने कुनै संकेत मिलेको छैन् । भलै दुवै विवादित अध्यादेश फिर्ता भइसके पनि अध्यादेशका कारण सिर्जित विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन दबाब बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा नैतिकता, इमानदारीता र जवाफदेहीता नभएको भन्दै सत्तारूढ दलका अधिकांश प्रभावाशाली नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधमा उत्रिएपछि ओलीलाई..
उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्दै, लकडाउनबारे निर्णय हुने
काठमाडाैं, १३ वैशाख। सरकारले आज कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउनकाे म्याद थप्ने/नथप्नेबारे निर्णय गर्ने भएको छ । तेस्रो पटक लम्ब्याइएको लकडाउन सोमबार (१५ वैशाख) सकिने भएकाले सरकारले आज लकडाउन थप्नेनथप्नेबारे निर्णय गर्ने भएको हो । लकडाउनलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने बारेमा आज कोभिड–१९ उच्चस्तरीय रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दै छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिलाई लकडाउनबारे..
कोरोना संक्रमण जोखिम रोकथामका लागि लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएपछि सरकारले आन्तरिक उडानमा मापदण्ड बनाएर खोल्ने तयारी गरेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुसार कोरोनाको जोखिम कम हुँदै जाँदा लकडाउनलगायत उडानसमेत खुला गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । प्राधिकरणले पर्यटन मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र वायुसेवा सञ्चालक संघको समन्वयमा मापदण्ड तयार गर्न लागेको..
विनाशकारी भूकम्पकाे पाँच वर्ष: पुनर्निर्माण '९० प्रतिशत सम्पन्न' तर कति सुरक्षित ?
काठमाडाैं, १२ वैशाख। नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको पाँच वर्ष पुग्दा विज्ञहरूले पुनर्निर्माणको चरणका 'बिल्ड ब्याक बेटर' अर्थात् अझ सुरक्षित निर्माणका महत्त्वपूर्ण अभ्यासलाई राम्रोसँग संस्थागत गर्न नेपाल चुकिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। झन्डै आठ लाख घरहरू भत्किएको उक्त विनाशकारी भूकम्पमा झन्डै नौ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखले भूकम्पका कारण क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणमा झन्डै ९० प्रतिशत प्रगति भएको बताएका छन्। भूकम्पका..
लकडाउन वैशाख २२ गतेसम्म लम्बिने संकेत, प्रधानमन्त्री भन्छन्- जीवन रहे अर्थतन्त्र उकासौँला
काठमाडाैं, १२ वैशाख। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या धमाधम बढ्न थालेपछि सरकारले लकडाउन थप गर्ने तयारी गरेको छ ।कम्तिमा थप एक हप्ता लकडाउन लम्ब्याउने तयारी भइराखेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार लकडाउन लम्ब्याउने विषयमा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि अधिकांश मन्त्री सहमत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले त लकडाउन लम्ब्याउनैपर्नेमा जोड दिएका थिए । खुल्ला सीमा भएको छिमेकी..
‘गर्मी अघि नै कोरोना महामारीकाे समाप्ती हुन्छ’
काठमाडाैं, १२ वैशाख। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले मिडिया ब्रिफिङका क्रममा अहिलेसम्मको तथ्यांकले कोरोना भाइरस संक्रमणमा कमी आइरहेको र आफूहरु राम्रो अवस्थामा रहेको देखाएको बताएका छन् । उनले न्युयोर्क, न्युजर्सीजस्ता केही हटस्पट कोरोना संक्रमणको उच्च बिन्दुमा पुगिसकेको र त्यहाँको अवस्थामा सुधार आउन थालेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘फेरि पनि हाम्रो अवस्था राम्रो भइरहेको छ र यदि हामी यस्तै प्रयास जारी राख्नेछौं..
पार्टी गठनबारे निर्वाचन आयोग र संसद्लाई जानकारी गराए जनता समाजवादीले
काठमाडाैं, १२ वैशाख। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीका नेताहरूले पार्टी एकीकरण गरी जनता समाजवादी पार्टी गठन गर्ने सहमति गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगमा गराएका छन् । उनीहरूले संसद् सचिवालयलाई पनि त्यसको जानकारी दिएका छन् । दुई पार्टीबीच बुधबार मध्यराति पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भएको थियो । बिहीबार बिहान साढे १० बजे उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, शरत्सिंह भण्डारीसहितका नेताहरू..
दल दर्ता गर्न केहिबेरमा निर्वाचन आयोग पुग्दै जनता समाजवादी पार्टी
काठमाडौं, ११ वैशाख । केहिबेरमा दल दर्ता गर्न जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोग जाने भएकाे छ । अहिले बाटोमा रहेको र केहिबेरमा आयोगमा पुग्ने नेता शिवजी यादवले जानकारी दिए । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपालबीच बुधबार अबेर राति पार्टी एकताको सहमति भएको थियो । नयाँ एकीकृत पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल राख्ने सहमति भएको हो । पार्टीको झण्डा समाजवादीले प्रयोग..
सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्दा पूर्वसचिव भीम उपाध्याय पक्राउ
काठमाडाैं, ११ वैशाख । काठमाण्डौ – सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्याय पक्राउ परेका छन् ।ललितपुरको कुसुन्तीमा रहेको निवासबाटै प्रहरीले उनलाई बुधबार साँझ पक्राउ गरेको हो । उपाध्यायले फेसबुक र ट्विटरबाट अफवाह फैलाउने गरी प्रचारबाजी गरेकाले पक्राउ गरिएकाे बताइएकाे छ । पछिल्लो समय उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालबाट सरकारको तीव्र आलोचना गर्दै आएका छन् । उपाध्यायको केही दिनअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालासँग सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौजकै..
आज १४ औं लोकतन्त्र स्थापना दिवस
काठमाडौं, ११ वैशाख । आज १४ औं लोकतन्त्र दिवस । विक्रम संवत् २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भई २०६३ वैशाख ११ गते नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । त्यसैकाे सम्झनामा आज लोकतन्त्र दिवस मनाइन्छ । २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि जनताको शक्तिका सामु आजकै दिन निरङ्कुश राजतन्त्रले घुँडा टेकेको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना गर्दै..
मध्यरातमा समाजवादी र राजपाबीच एकीकरण, नयाँ पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी’
काठमाडाैं, ११ वैशाख। समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीचको लामो छलफलपछि बुधबार अबेर राति पार्टी एकीकरणको टुंगो लागेको हो । सरकारले पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एक ठाउँमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पार्टी विभाजन गर्न सकिनेगरी अध्यादेश ल्याएपछि दुई पार्टीबीच एकीकरण भएको हो । पार्टी एकता समानताको..
निको भए युएईबाट आएका धादिङका कोरोना संक्रमित युवक
युएईबाट आएका धादिङका कोरोना संक्रमित युवक २८ दिनपछि निको भएका छन्। उनी कोरोनाबाट निको हुने छैठौ व्यक्ति हुन्। टेकु अस्तपालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले युवकलाई आजै डिस्चार्ज गर्ने तयारी रहेको आहाखबरलाई जानकारी दिए। युएईबाट आएका उनलाई गत चैत १२ गते संक्रमण पुष्टि भएपछि टेकु अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। टेकु अस्पतालबाटै गत शनिबार फ्रान्सबाट आएकी प्रसिद्धि श्रेष्ठ पनि २७ दिनपछि कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किएकी थिइन्। उनीसँगै..
पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको आह्वान
काठमाडौं, १० वैशाख । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले वर्तमान चुनौतीपूर्ण घडीमा पार्टी एकताप्रति संवेदनशील रहन, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइराख्न र आपसी हार्दिकता अभिवृद्धि गर्न आह्वान गरेका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७१ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा संस्थापक महासचिव पुष्पलाल लगायत संस्थापकहरुको स्मरण गर्दै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बलियो र एकताबद्ध पार्टीबाट मात्रै..
पार्टी फुटाउन देशी–विदेशी शक्ति सक्रिय छन : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं, १० वैशाख ।सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छलफल र बहसबाटै पार्टी एकतालाई थप सृदृढ बनाउन सकिने बताएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ७१औं वर्ष पुगेको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै दाहालले यस्तो बताएका हुन् । ‘पार्टीभित्र खुला र जनवादी छलफल गरी तथ्यद्वारा सत्यको अन्वेषण गर्ने विधिमार्फत् पार्टी एकतालाई थप सुदृढ बनाउन सकिन्छ’, दाहालले विज्ञप्तिमा भनेका छन्..
दोलखा जाँदै गरेको बस मन्थलीमा दुर्घटना, २८जना घाइते, तीनको अवस्था गम्भीर
काठमाडौं , १० बैशाख । काठमाडौंबाट दोलखाका लागि छुटेको मिनीबस रामेछापको मन्थलीमा दुर्घटना हुँदा करिब २८ जना घाइते भएका छन् । बा २ ख ६८१८ नम्बर मिनिबस मन्थली नगरपालिका–६ कुनौरी मोडमा बुधबार बिहान ४ बजे दुर्घटनामा हुँदा २८ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जनाएको छ । घाइतेमध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। गम्भीर घाइतेमध्येका एकजनालाई काठमाडौंको ट्रमा सेन्टर..
अध्यादेशविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै कांग्रेस, समाजवादी, राजपा, राप्रपासहितका दलसँग छलफल गर्दै
काठमाडौं, १० वैशाख । मुलुक कोरोना महामारीको संक्रमणविरुद्ध जुधिरहेका वेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट देखिएको छ । अध्यादेश ल्याएकै दिन सोमबार आपत्तिजनक कदम र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति भन्दै टिप्पणी गरेको कांग्रेसले मंगलबार पदाधिकारी बैठक बसी षड्यन्त्रपूर्ण, जनताको जीवनप्रति उदासीन र संविधानका लागि अशुभ भन्दै यसविरुद्ध उभिन सबै..
यी हुन् बढुवा हुने एसएसपीहरूकाे सूची
काठमाडौं, १० वैशाख । गृह मन्त्रालयले १९ जना एसपीलाई एसएसपीमा बढुवा सिफारिस गरेको छ । बढुवा समितिको बैठकले १९ जना एसपीलाई एसएसपी बढुवा सिफारिस गरेको हो । बढुवामा सिफारिस हुनेहरुमा वीरेन्द्रकुमार बस्याल, जनक भट्टराई, बिष्णुकुमार केसी, भरतबहादुर बोहरा, कुबेर कडायत, केदार ढकाल, अशोक सिंह, सुदिप गिरी, दुर्गा सिंह छ्न् । यस्तै रवीन्द्र केसी, राजेशनाथ बास्तोला, किरण राणा, नवराज भट्ट, लालमणि आचार्य, यज्ञविनोद..
तेलको मूल्य इतिहासमै पहिलोपटक ऋणात्मक
काठमाडाैं, ९ वैशाख। अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्य इतिहासमै पहिलो पटक शून्यभन्दा तल झरेर ऋणात्मक बनेको छ । यो गिरावट सबैभन्दा तल्लो बिन्दु हो । कच्चा तेलको माग घट्नुका साथै भण्डारणका कमीका कारण तेलको मूल्यमा ऐतिहासिक गिरावट आएको हो । यो गिरावटको अर्थ तेल उत्पादक देशले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्नका लागि क्रेतालाई उल्टै पैसा दिनुपरेको छ । तेल बिक्री नभएमा भण्डारणको समस्या हुने..
सरकारको पछिल्लो कदमका बारेमा छलफल गर्न कांग्रेसले बोलायो आकस्मिक पदाधिकारी बैठक
काठमाडौं, ९ वैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आकस्मिक रुपमा पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । सरकारको पछिल्लो कदमका बारेमा छलफल गर्न कांग्रेसले मंगलबार बिहान पदाधिकारी बैठक बोलाएको हो । सरकारले सोमबार ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश बारे छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाइएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । उनले बिहान ९ बजे सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बैठक बस्ने बताए..
धनकुटामा श्रीमतीको कुटाइबाट श्रीमानकाे मृत्यु
धनकुटा छथरजोरपाटी– ४, पानी ट्याङ्कीका ४७ वर्षीय ईन्द्रबहादुर लिम्बूको श्रीमतीको कुटाइबाट मृत्यु भएको छ । सोमबार बिहान ७ बजे श्रीमान्/श्रीमतीको घरायसी विषयमा विवाद भई झगडा हुँदा श्रीमती धनमाया लिम्बूले लाठीले टाउकोमा प्रहार गर्दा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । ..
विशिष्ट व्यक्तिका सुरक्षाकर्मी कटौती गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं,८ वैशाख । सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई बताए । ती सुरक्षाकर्मी कटौती गरेर लकडाउनसम्बन्त्री सुरक्षामा खटाइने निर्णय भएको हो । यस्तै बैठकले दल बदलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ भने संवैधनिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याउने भएको छ । ..
राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय
काठमाडौं, ८ वैशाख । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकमा यसबारे छलफल भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । हालको कानून अनुसार राजनीतिक दल विभाजन हुनलाई संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान छ । अब त्यसमा के-के संशोधन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भए पनि बुँदागत रुपमा अध्यादेश मस्यौदापछि थाहा हुने ती..
Results 9727: You are at page 20 of 325